कसको हो प्रहरीले समातेको ८८ किलो सुन ? तस्करीलाई सघाउने को हो पावरवाला? | News Dabali
कसको हो प्रहरीले समातेको ८८ किलो सुन ? तस्करीलाई सघाउने को हो पावरवाला?
September 4, 2017 | 1:36 pm
काठमाडौं/ प्रहरीले काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट ८८ किलो सुन बरामद गरेको छ । सोमवार विहान २ बजे प्रहरीले क्षेत्रपाटीबाट सो परिणाममा सुन बरामद गरेको हो । टाटा सफारी गाडिमा बोकर ल्याइएको सुन प्रहरीले समाएको हो ।
प्रहरीले सुनसहित गाडि चालक मकवानपुरका मनोज अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ । सोमवारसम्ममा तस्करीको सुन काठमाडौंमा आउने सूचना प्रहरीले पहिल्यै पाएको थियो । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उक्त सुनको जानकारी आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले उज्यालो नहुँदै क्षेत्रपाटीबाट सुन समाएको हो । महाशाखाका एसएसपी विवेश लोहनीले उक्त विषयमा थप अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको बताए ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार यति ठूलो परिमाणको सुन थुप्रै कनेक्सनहरुबाट काठमाडौं आएको हाे । ‘सुन तस्करीमा एक जना चिनियाँ नागरिक पनि संलग्न रहेको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘एक दुई जना मात्रै मिलेर यति धेरै सुन ल्याउन सकिँदैन । नेपालकै पनि हाइप्रोफालहरुको संलग्नता रहेको पनि हुन सक्छ ।’
सुन चीनबाट काठमाडौं आएको हो । सुनले चीनबाट नेपाल छिर्ने मुख्य नाका केरुङ मात्रै होइन अरु थुप्रै चेकपोष्टहरु पनि पार गर्दै आएको छ । त्यसैले सुन तस्करीमा ‘पावरवाला’ सरकारी अड्डाकै अधिकारीहरुको पनि मिलेमतो देखिन्छ ।
प्रहरीका अनुसार प्रक्राउ परेका चालकले अहिले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पूर्ण रुपमा असहयोग गरेका छन् । उनले कुनै पनि कुराहरु खोल्न चाहेका छैनन् । ‘उसले हामीहरुलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको छैन,’ अपराध महाशाखाका एसएसपी लोहोनीले भने, ‘अब हामी लामो अनुसन्धान गरेर उनीहरुलाई संगठित अपराधकै मुद्दा चलाउँछौं ।’
प्रहरीले बा १७ च ६४२७ नम्बरको गाडिलाई सुनसहित पक्राउ गरेको हो । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी र ट्राफिकबाट सजिलै छलिनका लागि गाडिमा ‘भिआइपी संकेत’ समेत राखिएको थियो ।
तर प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा झण्डै पचास करोड मुल्यको ८८ किलो सून र झण्डै ५० लाख रुपैयाँको गाडी बरामद गरेको हो ।
प्रहरीले सुन तस्करीको पहिलो निगरानी काठमाडौंका सून व्यापारीलाई बनाएको छ । काठमाडौंमा ल्याएको सुन बजारमा पठाउनको लागि सुन व्यापारीहरुको मुख्य हात हुने भएकाले तस्करीमा व्यापारीहरु पनि संलग्न रहेको लख प्रहरीले काटेको छ ।
यति ठूलो परिमाणमा पहिलो पटक सुन समातिएको हो । यो भन्दा अघि प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले साढे ठूलो परिमाणमा ३३ किलो सुन बरामद गरेको थियो । उक्त सुन तस्करीमा पनि काठमाडौंका सुन व्यापारीहरुको संलग्नता रहेको देखिएको थियो ।